बार्सिलोनामा मेस्सी, वर्तमान र इतिहास - बडिमालिका खबर
बार्सिलोनामा मेस्सी, वर्तमान र इतिहास
एजेन्सी — अर्जेन्टिना तथा बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सी करिब १६ वर्षदेखि विश्‍व फुटबलमा चर्चित खेलाडी हुन् । लामो समय बार्सिलोनामा बिताएका मेस्सीले क्लबका लागि धेरै खाले उपाधिहरू जिताएका छन् । बार्सिलोनाको फुटबल जीवनको लामो अवधिभर हरेक सिजन मेस्सीले बार्सिलोना छाड्ने चर्चा चलिरहन्छ ।
तर, मेस्सीको हकमा यो सिजन फरक भयो । बार्सिलोना यो सिजन उपाधिविहीन भयो । लामो समय स्पेनिस फुटबलमा राज गरेको बार्सिलोनाले यो सिजन उपाधि जित्न नसक्नुमा क्लब प्रशिक्षकसँगै मेस्सीलाई पनि दोष आयो । सन् २०१८ देखि बार्सिलोनामा कप्तानीको भूमिका निभाइरहेका मेस्सी यो सिजन पनि बार्सिलोनालाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिताउन असफल भए ।
बार्सिलोना यो सिजन च्याम्पिन्स लिगको क्‍वाटरफाइनलबाट बाहिरिने मात्र होइन । क्लबले लज्जास्पद हार पनि व्यवहोर्यो । बार्सिलोना जर्मन क्लब वायर्न म्युनिखसँग ८-२ गोल अन्तरले पराजित भयो । बार्सिलोनाले सन् २०१५ देखि च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि जित्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा समर्थकहरूले बार्सिलोना यो सिजन उपाधि जित्‍ने आशा गरेका थिए । ला लिगाको उपाधि जित्‍न नसकेको बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिगामा पनि लज्जास्पद हार व्यहोर्दा कप्तान मेस्सीप्रति पनि आलोचना हुँदै आयो ।
समर्थकहरूको आलोचनालाई निहाल्दै मेस्सीले पछिल्लो समय बार्सिलोना छोड्ने योजना बनाए । सुरुवाती समयमा प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटीमा जाने चर्चा भएका मेस्सी पछिल्लो समय इटालियन क्लब इन्टर मिलानसँग पनि जोडिए । उता फ्रेन्च क्लब पीएसजीले पनि मेस्सीलाई क्लबमा भित्राउने योजना रहेको बतायो । लामो चर्चा भएपछि मेस्सीले मंगलबार क्लबलाई आफू बार्सिलोना छाड्न चाहेको बताएका छन् ।
अंग्रेजी पत्रिका बीबीसीले मेस्सीले बार्सिलोना छाड्न चाहेर क्लबलाई पत्र पठाएको पनि बताएको छ । “लामो समय बार्सिलोनामा बिताएका मेस्सीले क्लब छाड्ने योजना बनाएका छन् । मेस्सीले यसको लागि क्लबका आधिकारिक पत्र पनि पठाएका छन् । मेस्सीले क्लबमा नबस्‍ने चाहना बनाएका छन् । अब बार्सिलोनाले मेस्सीको पत्रको जवाफ के कसरी दिन्छ भन्ने छ,” बीबीसीले लेखेको छ ।
बार्सिलोना छोडे मेस्सी कहाँ जान्छन् ?
विश्व फुटबलमा राज गरिरहेको मेस्सीलाई युरोपका जुनसुकै क्लब महँगो मूल्य खर्च गरेर क्लबमा अनुबन्ध गर्न सक्नेछन् । यदि मेस्सीको चाहना रहेमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानले पनि उनलाई क्लबमा अनुबन्ध गर्ने योजना बनाएको छ । इन्टर मिलान पटक-पटक मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । सन् २०१५ को सिजन पनि इन्टर मिलानले मेस्सीलाई क्लबमा अनुबन्ध गर्ने विश्‍व फुटबलको सबैभन्दा महँगो मूल्यमा अनुबन्ध गर्ने बताएको थियो ।
मेस्सीलाई इन्टरले बार्सिलोनाले दिएभन्दा दोब्बर बढी पारिश्रमिक दिने र उनको मार्केट भ्यालु सबैभन्दा धेरै बनाउने बताएको थियो । मेस्सीले इन्टर मिलानको अफर अस्वीकार गरे । बार्सिलोनामै फुटबल करियर बनाउने योजना बनाएका मेस्सीले अब भने क्लब छाड्ने योजना बनाउँदा इन्टर मिलानले चासो देखाएको छ ।
हाल मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्न जुनसुकै क्लबले ७०० मिमियन युरो रिलिज क्लज दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि इन्टर तयार भएको क्लबका अध्यक्ष स्टिभन जेहाङले बताएका छन् । उनले मेस्सी इन्टरमा आउन चाहे क्लबले जति सुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार भएको बताए ।
यता प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले पनि मेस्सीप्रति चासो देखाएको छ । प्रिमियर लिगामा यो सिजन कमजोर रहेको सिटीले मेस्सीका लागि ठूलो मूल्य दिन तयार भएको बताएको छ । सिटीका मुख्य प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिवालाले पनि मेस्सीलाई क्लबमा भित्र्याउन आतुर भएको बताएका थिए । ग्वार्डिवाला र मेस्सीको राम्रो सम्बन्ध छ । मेस्सीलाई विश्व फुटबलमा स्थापित गर्न ग्वार्डिवालाको ठूलो भूमिका छ । ग्वार्डिवालाको कार्यकालमा मेस्सी र बार्सिलोनाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
६ पटकका बालोन डी’ओर विजेता मेस्सीलाई हाल फ्रेन्च क्लब पीएसजीले पनि अनुबन्ध गर्ने योजना बनाएको छ । मुख्य प्रशिक्षक टुचेलले मेस्सीलाई पीएसजीले स्वागत गर्न तयार भएको बताएका छन् ।
“मेस्सीलाई पीएसजीमा स्वागत छ । हामीले कप्तान थिएगो सिल्भा र एरिक म्याक्सिमलाई गुमाइसकेका छौं । टोलीलाई ठूलो बनाउन हामीले अब ट्रान्सफर विन्डोजको प्रयोग गर्नुपर्छ । अभियान कुनै ब्रेकबिना जारी रहनेछ । किनभने हामीले एउटा कडा टोली निर्माण गर्न आवश्यक छ,” टुचेले भनेका थिए ।
यी सबै हालसम्म मेस्सीको अनुबन्धका लागि तयार भएका क्लबहरू हुन् । तर, मेस्सीले आधिकारिक रुपमा बार्सिलोनाबाट राजीनामा दिएका भने छैनन् ।
के भन्छ बार्सिलोना ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनामा हाल विश्वस्तरका खेलाडीहरू छन् । बार्सिलोनामा मेस्सीसँगै विश्‍व विजेता ग्रिजम्यानदेखि लिएर जेरार्ड पिके, जोर्डी आल्भा, सर्जियो बुस्केटजस्ता खेलाडीहरू छन् । त्यस्तै क्लबमा लुइस स्वारेज, ओसमान डेम्बेले पनि छन् ।
क्लबले अब धेरै खेलाडीलाई बेच्‍ने चाहना गरेको छ । बार्सिलोनामा हाल ३० वर्षमाथिका खेलाडीहरू नरहने गरी बेच्‍ने चाहना बनाएको हो । क्लबले बेच्‍ने योजना बनाएका खेलाडीको सूचीमा मेस्सी भने छैनन् । बार्सिलोनाले भित्र्याएका नयाँ प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले पनि बार्सिलोनामा धेरै कुराको परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
उनले पनि बार्सिलोनाले धेरै खेलाडीलाई बेच्नु पर्ने बताएको थियो । जसको सूचीमा लुइस स्वारेजलगायत पाँच खेलाडी छन् । कोम्यानको सूचीमा मेस्सी भने छैनन् । कोम्यानले पनि आफू मेस्सीसँगै क्लबका लागि काम गर्न आतुर भएको बताएका थिए ।
बार्सिलोना बोर्डले पनि हाल मेस्सीलाई क्लबले बिदाइ गर्ने योजना नगरेको बताएको छ । पछिल्लो समय बार्सिलोनामा मेस्सी नरहने बताएपछि क्लबले आधिकारिक रुपमै मेस्सीलाई नबेच्‍ने बताएका थियो । त्यसका लागि बार्सिलोनाले मेस्सीको रिलिज क्लज ७०० मिलियन युरो राखेको छ । यदि मेस्सीले क्लब छाड्न चाहे बार्सिलोनाले बेच्‍नुपर्ने हुन्छ ।
विश्व फुटबल इतिहासमा विभिन्‍न खेलाडीले आफ्नो खेलका माध्यमबाट समर्थकहरूको मन लोभ्याएका छन् । खेल प्रदर्शनको हिसाबले उनीहरूलाई समर्थन गर्ने मानिस (फ्यान) पनि त्यति नै छन् । त्यसमध्येका सफल खेलाडी हुन् लियोनल मेस्सी । मेस्सी अर्जेन्टिना तथा बार्सिलोनाका कप्तान हुन् । उनले क्लब र देशका लागि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । मेस्सीले स्पेनिस क्लब बार्सिलोनामा रहँदै क्लबका लागि सम्पूर्ण खाले उपाधि जिताइसकेका छन् ।
मेस्सीले सन् १६ नोभेम्बर, २००३ मा (१६ वर्ष र १४५ दिनको उमेरमा) पोर्टोविरुद्ध एक मैत्रीपूर्ण खेलबाट बार्सिलोनाका लागि आफ्नो खेलजीवनको औपचारिक आरम्भ गरे । त्यसको एक वर्षभन्दा पनि कम समयमै सन् १६ अक्टोबर २००४ मा (१७ वर्ष र ११४ दिनको उमेरमा) फ्रान्क रिजकार्डले उनलाई इस्पेन्योलविरुद्धको खेलबाट आफ्नो पहिलो लिग खेल सुरु गर्ने मौका दिए र उनी त्यस समयसम्ममा बार्सिलोनाका लागि खेल्न तेस्रो सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडी र ला लिगामा गोल गर्ने सबैभन्दा युवा क्लब खेलाडी बने (जुन रेकर्ड सन् सेप्टेम्बर, २००७ उनकै सहकर्मी बोजन क्रिचले तोडे) जब उनले १ मे २००५ मा अल्बासेट ओलाम्पिकोविरुद्ध क्लबका लागि आफ्नो पहिलो सिनियर गोल गरे तब मेस्सी १७ वर्ष, १० महिना र ७ दिनको (उमेर) थिए । उनी बार्सिलोनाका लागि ला’लिगा खेलमा गोल गर्ने सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडी बने ।
जुन रेकर्ड २००७ मा मेस्सीकै सहयोगमा वजन क्रिचले तोडे । मेस्सीले बार्सिलोनाका लागि धेरै रेकर्डहरू बनाइसकेका छन् । उनले बनाएका रेकर्डमध्ये एउटै क्लबका लागि धेरै खेल खेल्ने खेलाडी, ला लिगा फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी, सर्वाधिक ६ पटक बालोन डी’ओरको उपाधि जित्ने खेलाडी, बार्सिलोनाका लागि च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी, एउटै सिजन ९१ गोल गर्दै गिनिज बुक ओल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने खेलाडी लगायत धेरै रेकर्ड बार्सिलोनाका लागि राखेका छन् ।
मेस्सीले सन् २००४ देखि हालसम्म बार्सिलोनाका लागि ६६९ गोल गरेका छन् । मेस्सीले स्पेनिस ला लिगामा मात्र ४८५ खेलमा ४४४ गोल गरेका छन् । मेस्सीले सन् २०११-१२ को सिजनमा ला लिगामा ५० गोल गरेका थिए । च्याम्पियन्स लिगमा भने मेस्सी सर्वाधिक गोलकर्ताको दोस्रो स्थानमा पर्छन् ।
उनले च्याम्पियन्स लिगमा हालसम्म ११५ गोल गरेका छन् । मेस्सी युभेन्ट्सका स्टार खेलाडी क्रिस्टियोनो रोनाल्डोको १३० गोल छ । मेस्सीले कोपा डेल रेमा बार्सिलोनाका लागि ५५ गोल गरेका छन् ।
आइसियूमा उपचाररत ललितपुरकी कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु
नेयमारसहित पाँच खेलाडीलाई रातो कार्ड, पीएसजी लगातार दोस्रो खेलमा पराजित